२१% ब्याजमा ऋण लिइ सुरु गरिएको पुस्तक पसलले फेर्यो जिन्दगी!
किताबै किताबको चाङ्गहरुको बीच, अग्लो कद, हट्टाकट्टा ज्यान र चट्ट परेको ह्याट लगाएर बसेका एक युवक ग्राहकलाई स्वागत गर्न तम्तयार भएर बसेका छन्। उनको नाम हो बसन्त राज भट्टराई।
उद्यमी नेपालको टीम प्रदर्शनीमार्ग स्थित सुनौलो बुक सेन्टर पुग्दा दुईजना म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी केही किताबका नामहरुमा पब्लिकेसन जोडी “दाई यी किताबहरु छन् कि छैन ? भन्दै सोध्दै थिए । एक्कैछिनमा अर्को एक हुल विद्यार्थी पनि थपिए। बसन्तलाई भ्याईनभ्याई भयो।
त्यत्तिकैमा झोलामा केहि बोकेर एक युवती पसलको सानो दैलोबाट भित्र छिरिन्। यी हुन् बसन्तकी श्रीमती कमला भट्टराई । कमला हरेक दिन बिहान १० बजे श्रीमानको लागि ताततातो खाना पसलमै लिएर आउछिन् र राती ८ बजेसम्म उनलाई किताब बेच्न सघाउछिन्। बिचमा किताब पुर्याउन बसन्त कतै मोटरसाईकलमा हुइकिदा उनी एक्लै पनि पसल चलाउछिन्।बसन्त भने आफ्नो डेरा अनामनगरबाट हरेक दिन बिहानै उठेर करिव ६ बजे पसल खोल्न आइ पुगी सकेका हुन्छन् ।
सिन्धुलीमा जन्मेका बसन्तलाई बाल्यकालमै धेरै दुखले गाज्यो। बाबु र आमाले छुटिएर बस्ने निर्णय गरे पछि बालख बसन्त आफ्ना दाजु र आमासँग काठमाडौँ छिरेका हुन्। आमाले जेनतेन मन्डी, मोजा, सुइटर आदि उत्पादन गर्ने एक कम्पनीमा काम गरि दुवै छोरालाई पढाइन्।
आमाको श्रमको महत्व बुझेका बसन्तलाई सधै आफनै खुट्टामा उभिनु पर्छ भन्ने लग्थियो। पाटन क्याम्पसबाट एस.एल.सी सकेर बसेका उनले काठमाडौँको एक चर्चित पुस्तक पसल “भृकुटी पुस्तक भण्डारमा” जीवनको पहिलो काम पाए। घामपानी नभनी साइकलमा कहिले यता त कही उता दौडीनुपर्ने, त्यस माथि पढाई। काम गर्दै उनले बि.ए पास गरे।
बिस्तारै भाग्य खुल्दै गयो। उनको गाउँका निकै राम्रो चिनजान भएका दाजुले प्रदर्शनी मार्गमा दुईवटा किताब पसलहरु खोलेका रहेछन्। एक दिन बसन्तले ती दाजुलाई आफ्नो व्यथा पोखे “कति अरुको काम गर्नु ? , अब त आफ्नै केहि गर्न मन छ।” दाजु पनि निकै मज्जाका, उनलाई राम्रो चलिरहेको एउटा पसल बेच्ने कुरा गरे। बसन्तले २१% ब्याजमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पसल किने।
पसल सोचे जस्तै चल्यो। राम्रो कुरा त के भने उनलाई पसल चलाउन आवश्यक ज्ञान भृकुटी पुस्तक भण्डारले दिइसकेको थियो। केही वर्ष अघि आफुलाई दुख दिएका तिनै अनुभवहरु अब उनका साथी बन्न आइसकेका थिए। करिब २०५० सालतिर खुलेको पसल, पुराना ग्राहकहरु त हुने भइहाले र त्यसमाथि पनि आर.आर क्याम्पस, ल क्याम्पस, नेपाल भाषा क्याम्पस आदि क्याम्पसहरुको विद्यार्थीका पहुचमा रहेको पसल हुदाँ किताबहरु बेच्न उनलाई कुनै कठिनाइ परेन।
पसल खोलेको दुई वर्ष पछि उनको मागी विवाह भयो। लिइएको ऋण पनि उनले ४ वर्ष लगाएर चुक्ता गरे। अब त बसन्तले ‘सुनौलो बूक्स सेन्टर’ चलाउन सुरु गरेको पुरापुरी ६ वर्ष भैसकेको छ। उनी ११ कक्षा देखि मास्टर्स डिग्री, मेडिकल, इन्जीनियरिङ्ग इन्ट्रान्स देखि लोकसेवा तथा उपन्यासहरुसम्मका किताबहरु बेच्दै आइरहेका छन्।
विशेषता के छ भने उनको पसलमा ४०% छुटमा पुराना किताबहरु किन्न सकिन्छ। आफ्ना पुराना किताबहरु पनि बेच्न चाहनेलाई उनी सधै स्वागत गर्छन्। पुराना किताबहरु बेच्दा सबै किताबहरुमा सुनौलो बूक्सको छाप धमाधम लगाउन उनी व्यस्त देखिन्थे।
छाप चै किन हान्नु भएको नि ? एउटी ग्राहकले जिज्ञासास्वरुप प्रश्न राखीहालिन्। जवाफमा बसन्तले हास्दै भने “यसरी छाप लगाएका किताबहरु पछि यहाँ बेच्न ल्याउनुभयो भने हामी किन्छौं, कोरकार नगरी ल्याउनुहोला है”।
"यस व्यवसाय गर्नका लागि किताबसम्बन्धि ज्ञान, चल्ने नचल्ने ठाउँको ज्ञान, कस्तो किताब र कुन लेखकका किताबहरु बढी बिक्छन् भन्ने कुराको राम्रो हेक्का हुनुपर्छ। मेरो दाजु पनि मलेसियाबाट फर्केर यस्तै पसल खोलि बस्नुभएको छ। अरुको काम गर्दा हप्कीदप्की सुन्नुपर्ने हुन्छ, निकै गार्हो हुन्छ। आफ्नो व्यवसायमा त आफ्नै मर्जी हुन्छ नि।"
सुरुवातदेखि नै सजिलै चलाउदै आइएको पसलले, अहिले रु.२०,००० पसल भाडा, १३,००० कोठा भाडा, ५ वर्षे छोरोको पढाई र काठमाडौँको खानपान अनि बसाईलाई धान्दै आएको छ।
“किताबको व्यवसाय गर्दा पैसाको आवतजावत भइ नै राख्छ तर धेरै कमाउने उदेश्य हो भने चाही यस व्यवसायबाट अलिक सम्भव हुदैन। अहिले पढ्ने मानिसहरु कम भइसके। पब्लिकेशन नै खोल्न सके मात्र धेरै फाइदा हुन्छ।”,उनले यस्तो जानकारी दिदै महिनामा ३० देखि ३५ हजारसम्मको नाफा हुने गरेको कुरा खुलाए।
यसरी कमाउछ यो मोबाइल पसलले महिनामा एक लाख...
काठमाडौँ मोडल अस्पतालबाट केही पाहिला बागबजार जाने...